SAHIRANA IREO MINISITERA
Mbola miaina amin’ny tsy misy ankehitriny ny ankamaroan’ireo minisitera.
Ny antony dia satria tsy mbola voafidy ny tetibola nasiam-panavaozana. Araka izany, tsy azo hahetsika ny vola izay tsy lanin’ireo minisitera teo aloha. Samy miala am-paosy ny tale jeneraly sy ny tale rehetra ary manomboka mimenomenona saingy mamy ny toerana ka tsy afa-manoatra sy miteny mafy.
MINISITERAN’NY TONTOLO IAINANA
Nampahafantarin'ny minisitra Alexandre Georget ampahibemaso omaly ireo zava-bita teo anivon'ny minisiteran’ny tontolo iainana tao anatin'ny 100 andro. Isan'ny nisongadina tao anatin'izany ny efa nahavitana fambolen-kazo mirefy 25 624,75Ha raha toa ka 40 000Ha no tanjona. Teo ihany koa ny fandraisana fepetra mahakasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ao amin'ny alan'i Vohibola, Bongolava maintso ary Menabe antimena, efa azo ihany koa ny scanner biologique izay hapetraka eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato hiadiana amin'ny fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanaharintsika, sns...
Rahampitso alarobia amin’ny 9 ora maraina no hiakatra fitsarana ireo mpiasan’ny ORTM voaroaka. Ny resaka tsy fanajana ny lehibe sy ny fidirana anaty Bar tamin’ny fotoana nanaovana ilay asa tagnamaro teny Mahitsy notarihin’ny minisitry ny serasera no antony nandroahana ireto mpiasan’ny haino amanjerim-panjakana ireto.
FAMONOANA MPITONDRA MOTO
Mbola mitohy ny famonoana mpitondra moto eny Anosibe sy ny manodidina. Mpiasam-panjakana hamonjy fodiana ka nandeha moto no novelesin’ny jiolahy avy eny ambony eny. Vaky tanteraka ny lohany ary tsy nahatsiaro tena avy hatrnay. Lasa ny moto ary ilay lehilahy kosa mbola miady amin’ny fahafatesana hatreto any amin’ny hopitaly.
ZAZAVAVY 10 TAONA NAOLANA
Zazavavy 10 taona naolan’ny diakona iray ao Ambovombe. Nisy fiantraikany ara-tsaina izany ary hatramin’izao ilay zaza dia mbola arahi-maso akaiky eny amin’ny hopitaly ny fahasalamany. Voalaza mantsy fa mbola niharan’ny vono sy daroka koa izy ankoatra ny fanolanana. Nosamborina ilay rangahy nahavanon-doza ary nidoboka am-ponja vonjimaika ao an-toerana.
Be loatra ny haino aman-jery izay tsy mazava ny momba ny « licence » izay hampiasain’izy ireo. Ary amin’izao vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra izao no tena mivoaka tsikelikely izy ireo. Mahazo ny kihana tsy an-kijanona ny mpitondra ankehitriny any amin’ny faritra izay tsy eritreretina firy kanefa manan-danja ireo haino aman-jery. Ireo onjam-peo no tena mamely mafy. Velombelona tampoka ny Hvm.
MAROANTSETRA TSY MISY SOLIKA
Tsy misy solika ao an-drenivohitr’i Maroantsetra ankehitriny ary mikatso tanteraka ny fiainan’ny olona vokatr’izany. Izany dia tsy hiverina amin’ny laoniny raha tsy amin’ny alarobia izao farafahaingany. Raha araka ny tatitry ny ofisim-pirenena misahana ny solika dia tsy firindran’ny asa no anton’io tsy fisiana io. Tsy tonga ara-potoana ny sambo izay tokony hamatsy ny solika.
KANDIDA MIVARALILA SAHADY
Efa mivaralila sahady ny kandidà sasany raha araka ny fanamarihan’ny CENI izay manao fanaraha-maso akaiky amin’izao fotoana. Ny tena mivaingana sy tsy azo andeferana amin’izany dia ny fisian’ireo izay milaza fa kandidam-panjakàna na natolotry ny olom-panjakana ambony. Ary dia tena ampiasain’izy ireo any anaty fampielezan-kevitra tokoa izany ankehitriny. Mila hentitra ny CENI.
MPANAO FACEBOOK KAROHAINA
Maromaro ny mpandrindra kaonty facebook izay efa karohana ankehitriny. Izany dia noho ny famingavingana anaran’olona ary koa fanalam-baràka tsy an-kijanona izay mahazo ny olo-malaza matetika. Ireo artista no tena ataon’ireo kaonty tsy mitombina fialam-boly ary manomboka mifampitaona mba hitory. Efa betsaka ny nidoboka am-ponja tamin’ny raharaha toa izany kanefa mbola misy sahy hatrany.